နေအိမ် > မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ် > ရထားအားဖြင့်အပြီးအစီးလမ်းညွှန်နိုင်ရန်ခရီးသွားခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်
Intercite ရထား (အိုင်စီ). တစ်ဦး Intercites ရထားမြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းများနှင့်ချိတ်ဆက်မြို့ကြီးများပေါ်တွင်ခရီးသွားအဖြစ်ပိုမိုတိုတောင်းသောအကွာအဝေးမထားတဲ့အမြန်ရထားဖြစ်ပါသည်. You can purchase IC tickets in advance to getadiscount.
high-speed ရထား (TGV). TGV ရထားပြင်သစ်တွင်အမြန်ဆုံးရထားများမှာ, နှင့်ထိုသူတို့အဘို့လက်မှတ်များဝယ်ယူရရှိနိုင်ကြသည် 90 ကြိုတင်မဲအတွက်ရက်ပေါင်း. သူတို့အဘို့စျေးနှုန်းများထွက်ခွာသွားနေ့စွဲချဉ်းကပ်မှုအဖြစ်မြင့်တက်ဆက်လက်, ဒါကြောင့်နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်းအစောပိုင်းသူတို့ကိုစာအုပ်ဆိုင်. ဝယ်ယူတစ်ဦးကလက်မှတ် 90 ကြိုတင်မဲအတွက်ရက်ပေါင်း€အသက် 30 ကုန်ကျနိုင်. သင်တို့မူကားတစ်ဦးရက်အနည်းငယ်ထွက်ခွာသွားရှေ့တော်၌မဝယ်ကြပါလျှင်, the ticket price could be as high as €100.
အဆင်သင့်ခြင်း. သင်တစ်ဦးလက်မှတ်ဝယ်ယူအကြောင်းကိုစိုးရိမ်ပူပန်ရန်သင့်အားရထားယူချင်တိုင်းအချိန်မလိုအပ်ပါဘူး, သင်ဆန္ဒရှိသော်လည်းသောရထားပေါ်တွင်နေရာရှိသည်မည်မဟုတ်ကတည်းကသင်မူကားပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိရမည်.
အရေးပါတဲ့မှတ်ချက်: သငျသညျထက်ပိုမှခရီးသွားလေ့ကျင့်လျှင်ရထားလမ်း Pass ကိုပိုက်ဆံအဘို့ကိုသာအကောင်းတန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါသည် 14 ရက်ပေါင်း, သငျသညျလျော့နည်းများအတွက်သွားလာလျှင်, ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်တစ်ဦးကရထားဟာယပူဇော်သက္ကာကိုသင့်ငွေပိုကောင်းတဲ့တန်ဖိုးကိုပူဇော်သည်အဘယ်အရာအဖြစ်မှတ်ရထားလက်မှတ်တွေမှပွိုင့်ထက်.
ခရီးသွားဧည့်ပြင်သစ်ငှါလာကြသောအခါ, သူတို့ထဲကအများစုပဲရစ်ရောက်ရှိမည်, တိုင်းပြည်အတွင်းရထားခရီးအဘို့မိမိတို့ စတင်. ပွိုင့်ထားတဲ့ဖြစ်ပါသည်. ပဲရစ်မှာစတင်လာတဲ့အခါ, သငျသညျတိုင်းပြည်အတွင်းနီးပါးမည်သည့်ဦးတည်ရာကိုရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကား Parisian ရထားဘူတာကနေတာဝန်ထမ်းဆောင်အဓိကနေရာများတချို့ရှိနေပါတယ်.
ရထားဘူတာရုံမှာအစောပိုင်းရောက်ရှိ. အနည်းဆုံးရထားဘူတာရုံမှာဖြစ်ရန်သေချာစေပါ 20 မထွက်ခွာမှီမိနစ်, သို့မဟုတ်သင်ကြီးမားရထားဘူတာကနေခရီးသွားလာနေသောတောင်မှအစောပိုင်းလျှင်, ထိုကဲ့သို့သောပဲရစ်အတွက် Gare du Nord အဖြစ်. ပြင်သစ်စကားမပြောတတ်ပါဘူးသူတစ်ဦးခရီးသွားဧည့်များအတွက်, သွားကြဖို့ဘယ်မှာ၏နည်းနည်းလေးစိတ်ကူးမလိုဘဲထွက်ခွာမတိုင်မီသာမိနစ်အနည်းငယ်ရောက်ရှိလာထက်ပိုဆိုးဘာမှမရှိဘူး. အစောပိုင်းအလုံအလောက်ရောက်ရှိလာသငျသညျဘူတာရုံသတင်းအချက်အလက်များအတွက်ထွက်ခွာဘုတ်အဖွဲ့စစ်ဆေးဖို့အချိန်ကိုငါပေးမည်, သင့်ရဲ့ရထားထွက်ခွာသောပလက်ဖောင်းခွဲခြားသတ်မှတ်, and find the right platform.
ပထမဦးစွာအဆင့်အတန်းနှင့်ဒုတိယ-class ကိုလက်မှတ်တွေ. ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားနှင့်ဒုတိယအတန်းအစားကားများအကြားသိပ်ကွာခြားချက်မရှိပါ. သို့သျောလညျး, ဒါဟာပထမဦးဆုံးအတန်းအစားထဲမှာတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်ထိုင်ခုံနည်းနည်းပိုကြီးများမှာ. ဒုတိယလူတန်းစားကားများမှာလည်းဿုံအဆင်ပြေများမှာ. It’s worth mentioning that first-class tickets cost about 1.5x more than the second-class fare.
သငျသညျစျေးပေါလက်မှတ်တွေပြန်အမ်းနိုင်ဘူး. Perhaps the only downside to cheap tickets is that they cannot be changed or refunded.
အသုံးပြုမှု Chip & PIN ကိုခရက်ဒစ်ကဒ်. တစ်ဦး automated လက်မှတ်ကို kiosk အပေါ်တစ်ဦးလက်မှတ်ဝယ်ယူရန်, သင်တစ်ဦး Chip လိုအပ်ပါလိမ့်မည် & PIN ကိုခရက်ဒစ်ကဒ်, ဒါကြောင့်သေချာသင်သည်သင်၏ PIN ကုဒ်ကိုသိပါစေ, ကျနော်တို့ကအကြံပြုကြဘူးပေမယ့်, ၎င်း၏အလွန်စျေးကြီးပြီးကတည်းက.
ပြင်သစ်တွင်အားလုံးအဓိကမြို့ကြီးများ TGV ခြင်းဖြင့်ချိတ်ဆက်ထား – နီးပါး၏အမြန်နှုန်းမှာခရီးသွားရထားနှင့်အတူမြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားကွန်ယက်ကို 200 တစ်နာရီမိုင်. ဤအအမြန်နှုန်းမှာ, all areas of France are within your reach.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “ရထားအားဖြင့်အပြီးအစီးလမ်းညွှန်နိုင်ရန်ခရီးသွားခုနှစ်တွင်ပြင်သစ်” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/guide-travel-france-train/ ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
မီးရထားခရီးသွားလာဗြိတိန်နိုင်ငံ, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, မီးရထားခရီးသွားလာအီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
မီးရထားခရီးသွားလာ, မီးရထားခရီးသွားလာပြင်သစ်, ဥရောပခရီးသွား